China Dental Desensitizer Kugadzira uye Fekitori | Lanhine
Inoshandiswa kurerutsa zviratidzo zvezino kukanganiswa kunokonzerwa nekuratidzwa kwedentin, nekukurumidza kusunungura kunzwisisika kwezino uye kudzorera zino enamel
Chigadzirwa chinonamatira pamusoro pemazino, calcium ions uye phosphate ions inoburitswa mushure mekusangana nemate, ipapo hydroxyapatite inoumbwa kuti isimbise zvakare mazino. Hydroxyapatite stably inozadza uye inonamatira kunzvimbo yezino kutsamwa kusimbisa iyo dentin tubules, uye kubvisa zviratidzo zvekurwisa.
Basa uye Chinangwa
Natural mineral uye chirimwa chinobviswa. Inogona kurerutsa allergy inokonzerwa nechando, inopisa, inovava uye inotapira emazino, inowedzera anti kurwisa kugona kwemazino, simbisa iyo inorwisa mabhakitiriya kugona kwemazino, uye bvisa iyo chaiyo kunhuhwirira kwemuromo.
Inogona kurerutsa allergy inokonzerwa nechando.hot.sour uye inotapira emazino.kusimudzira anti antijiki kugona kwemazino.kusimbisa anti-bac-terial kugona kwemazino, uye kubvisa kunhuhwirira kunoshamisa kwemuromo.
Geza mazino nekrimu 1.5cm nguva imwe neimwe, 3-4 nguva pazuva, gara mumuromo kwe3-5min, geza meno ako nemvura inodziya, sukurudza muromo wako zvirinani.
Silicon dioxide, strontium chloride, yakasarudzika mamineral uye chirimwa chinotora.
Yedu mhando dhairekitori sisitimu inovimbika yekupa kune wega mutengi.
Inovimbisa mibvunzo yese kuwana mhinduro nekukurumidza.
Inokwana kuverenga.kusvitswa kwekusvitswa. Inoshanda sevhisheni.
Isu tinovavarira kupindura nenzira kwayo uye nekukurumidza.
2.We tinobata hwakawanda zvigadzirwa
Isu tinodada neyedu yakakura productlineup inosanganisira zvipfeko, zvigadzirwa zvevana, uye zvinhu zvemumba.
3.Power yekuunganidza zvigadzirwa
Kutenda kune yedu yakakura nhamba yevanopa, isu tinogona kupa huwandu hwuno sangana nezvinodiwa zvako.
Ndokumbirawo unzwe wakasununguka kubvunza.
Tichapindura pamwe chete rinotevera zuva rekushanda kubva pazuva rekubvunza.
Ndokumbira utumire usan odha fomu.
Kutumira kunoitwa mushure memasvondo 1to maviri kubva kuodha yako.
Mubvunzo: Nguva yechokwadi?
A: Makore maviri.
Mubvunzo: Ndezvipi zvinangwa zvakagadzirirwa zvigadzirwa?
A: Zino kushushikana.
Mubvunzo: Mashandisiro ekushandisa chigadzirwa？
A: 1) Chenesa muromo wemuromo (brashe mazino)
2) Iyi gel inogona kuzorwa pachikamu chine hutachiona nemabhora ekotoni, uye inogona kuiswa mubrashi rezino, bhurasho uye kukwiza chikamu chine hutachiona zvinoenderana nenzira yekutsvaira mazino.
3) Sukurudza muromo mushure memaminitsi mashanu kusvika gumi.
A: Nyatsovhara vhara mushure mekushandisa ichi chigadzirwa.
Mubvunzo: Mamiriro ekuchengetedza？
A: Inoiswa panzvimbo yakaoma uye ine mweya.
Pashure: Medical Kutonhora Giriti Sheet (Yevana)
Zvadaro: Inofema Tepi (PE)